Intouch Medicare Khlong San ကို ဘယ်လိုသွားမလဲ။ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားဖြင့် - intouchmedicare
ခေါင်ဆန်ဌာနမှ အင်ထပ်မီဒီခဲဆေးခန်းတွင်လာနိုင်သော နည်းလမ်း နံပတ် ( ၁ ) BTS ၀ှန်‌‌‌‌‌‌‌‌‌၀ယ်‌ရိုင် (Wongwian Yai)
BTS ၀ှန်‌‌‌‌‌‌‌‌‌၀ယ်‌ရိုင် (Wongwian Yai) မှာဆင်းပြီးနောက် စွဲကလုန်ထွန်းပူရီ1 (Soi Krungthonburi 1) ကိုဆက်ပြီး ထိုအခါညာဘက် ချရွန်လတ်(Charoen Rat) လမ်းပေါ်သို့လှည့်ဝင်ပါ။ ဆေးခန်းဟာ စွဲချရွန်လတ် 18(Soi Charoen Rat)နှင့် 20 ကြားတွင်တည်ရှိသည်။ Wongwian Yai ဘူတာမှဆေးခန်းအထိအကွာအဝေး ၁.၄ ကီလိုမီတာရှိပြီး ၅ မိနစ်ကြာသည်။ * လိမ္မော်ရောင်အဆောက်အဦး ကိုသတိပြုပါ။
1.Wongwian Yai ဘူတာ
2. ထွက်ပေါက် နံပတ် (3)နဲ့ ထွက်ပါ
4. ဘူတာမှဆင်းလာသောအခါ ဆွဲကွန်ထွန်းပူရီ1(Soi Krungthonburi 1) ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ Soi Krungthonburi 1 ၏ရှေ့တွင်သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များကို အသုံးပြုပါ (သို့) တက္ကစီဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
5. ဆေးခန်းအား ဆွဲချရွန်လတ် (Soi Charoen Rat) 18 နှင့် 20 ကြားတွင်ညာဘက်ခြမ်း၌တည်ရှိသည်။ (လိမ္မော်ရောင်အဆောက်အဦး ကိုသတိပြုပါ)
ခေါင်ဆန်ဌာနမှ အင်ထပ်မီဒီခဲဆေးခန်းတွင်လာနိုင်သော နည်းလမ်း နံပတ် (၂ ) BTS ကလုန်ထွန်းပူရီ
BTS ကလုန်ထွန်းပူရီမှာဆင်းပြီး ဘတ်စ်ကားနံပတ် 105 , 84 ,3(သို့မဟုတ်) ဘတ်စ်ကားSubaru (Phanit Thon - Khlong San) များစီးပြီး ခေါင်ဆန်ကားမှတ်တိုင်ဆီမှာဆင်းပါ ထိုနောက် ဆိုင်ကယ်သမားတွေနဲ့ငှားလာလို့လည်းရ (သို့) လမ်းလျှောက်ဝင်လာလို့လည်းရ ချရွန်လတ် (Charoen Rat) လမ်းဖြစ်ပြီး ဆေးခန်းဟာ ဆွဲချရွန်လတ် 18 မှ 20 ကြားတွင်တည်ရှိနေပါသည် ၎င်းဆေးခန်းသည် ကလုန်ထွန်းပူရီ BTS မှ ဆေးခန်းအထိ2ကီလိုမီတာဖြစ်ပြီး 5-10 မိနစ်ခန်.ကြာမှာဖြစ်ပါသည်။
1. ကလုန်ထွန်ပူရီ (Krung Thon Buri BTS) ဘူတာမှဆင်းပြီး နံပတ် (3) ထွက်ပေါက်ဖြင့်ထွက်ပါ
2. ဘူတာမှဆင်းလာသောအခါဘတ်စကားမှတ်တိုင်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ခေါင်ဆန် (Khlong San) သို့ထွက်ခွာရန်ဘတ်စ်ကား 105၊ 84၊ 3၊ (သို့) subaru taxis (Phanit Thon - Khlong San) ဘတ်စ်ကားများဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ပါသည်။
3. ခေါင်ဆန် (Khlong San) ဘတ်စကားမှတ်တိုင်မှာဆင်းပြီးတဲ့နောက် မီးနီလမ်းဆုံကိုတွေ့လိမ့်မည်၊ ဘယ်ဘက်လမ်း ချရွန်လတ် (Charoen Rat)လမ်းသို့ လမ်းလျှောက်ဝင်လိုက်ပါ
4. ချရွန်လတ် (Charoen Rat) လမ်းသို့လမ်းလျှောက်သောအခါဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဘတ်စ်ကားနံပါတ် 57 စီးပြီး ဆွဲချရွန်လတ်20 (Soi Charoen Rat 20) မှာဆင်းနိုင်သည် (သို့မဟုတ်) ဆိုင်ကယ်သမား / သုံးဘီးဆိုင်ကယ်တက္ကစီဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ လမ်းလျှောက်လျှင် ဆွဲချရွန်လတ် (Soi Charoen Rat) လမ်းမှဆေးခန်းအထိ အကွာအဝေး 650 မီတာခန့်ရှိသည်
5. ပုံမှန်ဘတ်စ်ကားဟာ ဆွဲချရွန်လတ်20 (Soi Charoen Rat 20) မှတ်တိုင်မှာဆင်းပြီး ရှေ့တည့်တည့်သို့လမ်းလျှောက်လျှင် မီတာ ၁၀၀ ခန့်ရှိ့ပြီး ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိဆေးခန်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
6. ဆေးခန်းသည် ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိ ဆွဲချရွန်လတ်20 (Soi Charoen Rat 20) နှင့် ဆွဲချရွန်လတ်18 (Soi Charoen Rat 18) အကြားတွင်တည်ရှိလိမ့်မည် (လိမ္မော်ရောင်အဆောက်အဦး ကိုသတိပြုပါ)